Diyaarad Helicopter ah iyo diyaarad ayaa isku dhacay hawada sare ee Arizona halkaas oo ay ku dhinteen 2 qof
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Diyaarad Helicopter ah iyo diyaarad ayaa isku dhacay hawada sare ee Arizona halkaas oo ay ku dhinteen 2 qof
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Shilka midir ayaa subaxnimadii jimcaha ka dhacay meel u dhow gegida diyaaradaha ee degmada Chandler, oo ku taal xaafad ku taal caasimadda gobolka Arizona ee Phoenix.
Shilka Midair oo u dhexeeya helikobtar iyo diyaarad baal oo go'an ayaa ka dhacday meel u dhow McQueen iyo Queen Creek ee Arizona.
Diyaaradda ayaa awood u yeelatay inay si nabad ah ku degto balse helikobtarkii ayaa shil galay oo dab qabsaday, waxaana ku dhintay 2 qof oo saarnaa.
Shilkan naxdinta leh ayaa yimid saddex bilood kadib markii shil kale oo diyaaradeed oo yar uu ka dhacay gegida diyaaradaha ee degmada Chandler.
Diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah iyo diyaarad yar ayaa isku dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee degmada Chandler Arizona.
Gawaarida soo dhacday ayaa u dhow Madaarka Degmada Chandler ee Arizona
Diyaaradda ayaa ku guulaysatay inay si nabadgelyo ah ku degto, laakiin helikobtarkii ayaa shil galay oo holac ka kacay.
Labada qof ee saarnaa diyaarad Helicopter ah ayaa la dilay, halka rakaabkii diyaaradda ay iska tageen iyagoo aan waxba gaarin.
Shilka midir ayaa subaxnimadii Jimcaha ka dhacay meel u dhow Madaarka Degmada Chandler, oo ku yaal xaafad ka mid ah magaalada Arizonamagaalo madaxda gobolka ee Phoenix.
Madaxa Guutada Dabka ee Chandler Keith Welch ayaa xaqiijiyay in laba qof oo saarnaa diyaaradda Helicopter-ka ah ay dhinteen, halka rakaabkii diyaaradda oo ahaa diyaarad dab-shidkeedu yahay kuwa aan u baahnayn daryeel caafimaad.
Cid dhulka joogtaa wax ma yeelin.
Xaaladaha shilka ma cadda, booliiska Chandler ayaa wicitaan u diray markhaatiyaasha iyo muuqaalka fiidiyowga dhacdada.
Sawirro ay wadaageen weriyeyaasha maxalliga ah durbadiiba waxay muujinayaan diyaaradda oo istaagtay meel ka durugsan waddada ay diyaaraduhu ku ordaan, oo sida muuqata si buuxda u cilladaysan.
Muuqaalo kala duwan ayaa muujinaya hadhaagii helikabtarrada oo u muuqda meel wasakh ah, oo qayb ka mid ah ay daboolleen shaqaalaha gurmadka.
Shilkan naxdinta leh ayaa yimid saddex bilood kadib markii shil diyaaradeed oo yar uu ka dhacay gegida diyaaradaha ee degmada Chandler. Dabayaaqadii bishii Luulyo, hal-matoor Beechcraft Bonanza B36 oo ay saarnaayeen afar qof ayaa shil galay oo dab qabsaday waxyar ka dib markii ay duushay, taas oo u dirtay hal qof oo cusbitaal ah saddex kalena dhaawacay.